Ɔtemmufo Samson kɔpɛɛ yere wɔ Filistifo mu (1-4)
Yehowa honhom maa Samson nyaa ahoɔden de kum gyata (5-9)
Samson akasabebu wɔ ayeforo no ase (10-19)
Wɔde Samson yere maa ɔbarima foforo (20)
14 Na Samson kɔɔ* Timna, na bere a ɔwɔ Timna no, ohuu Filistini bea* bi. 2 Enti ɔkɔka* kyerɛɛ ne papa ne ne maame sɛ: “Mahu Filistini bea bi wɔ Timna, na mepɛ sɛ mokɔware no ma me.” 3 Nanso ne papa ne ne maame bisaa no sɛ: “Enti worennya ɔbea biara wɔ w’abusuafo ne yɛn nkurɔfo nyinaa mu?+ Filistifo a wontwaa twetia* yi mu na worekɔpɛ yere?” Nanso Samson ka kyerɛɛ ne papa sɛ: “Kɔware no ma me, efisɛ ɔno ara na mepɛ no.”* 4 Ná ne papa ne ne maame nnim sɛ Yehowa nsa wom, efisɛ na Ɔrehwehwɛ kwan a ɔbɛfa so anya Filistifo no. Saa bere no, na Filistifo di Israel so.+ 5 Enti Samson ne ne papa ne ne maame kɔɔ* Timna. Bere a Samson duu Timna bobe mfuw* mu no, ɔnkɔhwɛ a, gyata* bi na ɔrebobom ba no so yi! 6 Ɛnna Yehowa honhom maa no ahoɔden,+ na ɔwaee gyata no mu abien sɛnea obi de ne nsa wae apɔnkye ba mu no. Nanso wanka nea wayɛ no ankyerɛ ne papa anaa ne maame. 7 Afei ɔtoaa so kɔe, na ɔne ɔbea no kɔkasae, na Samson hui sɛ ɔno ara ne ɔbea a ɔpɛ no.+ 8 Bere bi akyi no, ɔkɔe sɛ ɔrekɔfa ɔbea no aba fie.+ Bere a ɔrekɔ no, ɔman kɔhwɛɛ gyata no funu no, na ohui sɛ nnowa ne ɛwo ahyɛ mu ma. 9 Enti oyii ɛwo no bi kuraa ne nsam, na ɔrekɔ nyinaa na ɔredi. Bere a ɔkɔtoo ne papa ne ne maame no, ɔmaa wɔn bi dii. Nanso wanka ankyerɛ wɔn sɛ oyii ɛwo no fii gyata a wawu mu. 10 Na ne papa toaa so koduu ɔbea no nkyɛn, na Samson tow pon wɔ hɔ, efisɛ saa na na mmerante no taa yɛ. 11 Bere a wohuu no no, wɔde mmarima 30 brɛɛ no sɛ ayeforokunu nnamfo a wɔbɛka ne ho. 12 Ɛnna Samson ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Munim, muntie akasabebu* yi. Sɛ mutumi kyerɛ ase ansa na nnanson a yɛde retow pon yi aba awiei a, mɛma mo nwera ntaade 30 ne ntaade nguguso nso 30. 13 Na sɛ moantumi ankyerɛ me ase a, ɛnde mobɛma me nwera ntaade 30 ne ntaade nguguso nso 30.” Na wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ma yentie w’akasabebu* no.” 14 Enti ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Odidifo mu na biribi a wodi fi bae,Na ɔhoɔdenfo mu na biribi a ɛyɛ fremfrem fi bae.”+ Na wɔtenaa akasabebu* no ho nnansa a wɔantumi ankyerɛ ase. 15 Afei da a ɛto so anan no, wɔka kyerɛɛ Samson yere sɛ: “Daadaa wo kunu+ na ɔnkyerɛ yɛn akasabebu* no ase. Anyɛ saa a, yɛbɛhyew wo ne wo papa fifo nyinaa. Adɛn, mode yɛn baa ha sɛ morebegye yɛn ho nneɛma anaa?” 16 Enti Samson yere su guu no so sɛ: “Mahu sɛ wotan me; wonnɔ me.+ Woabu me nkurɔfo bɛ,* nanso wonkyerɛɛ me ase.” Ɛnna Samson ka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ, me ara me papa ne me maame mpo menkyerɛɛ wɔn ase! Wo na menkyerɛ wo ase anaa?” 17 Na nna a aka ama nnanson apontow no aba awiei no nyinaa, ɔbea no su guu no so. Afei da a ɛto so ason no, ɔkyerɛɛ no ase, efisɛ na ɔreguan ne ho. Ɛnna ɔbea no nso kɔkaa akasabebu* no nkyerɛase kyerɛɛ ne nkurɔfo no.+ 18 Enti da a ɛto so ason, ansa na owia rekɔtɔ no,* kurom hɔ mmarima ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛdɛn na ɛyɛ fremfrem sen ɛwo?Na ɛdɛn na ɛwɔ ahoɔden sen gyata?”+ Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ ɛnyɛ me nantwi ba* na mode no funtumii a,+Anka moantumi ankyerɛ m’akasabebu* no ase.” 19 Ɛnna Yehowa honhom maa no ahoɔden,+ na osian kɔɔ Askelon+ kokunkum wɔn mmarima 30, na oyii wɔn ntaade de maa wɔn a wɔkyerɛɛ akasabebu* no ase no.+ Na ɔde abufuw san kɔɔ* ne papa fi. 20 Na wɔde Samson yere+ no maa mmarima a na wɔka ne ho sɛ ayeforokunu nnamfo no baako.+
^ Anaa “sian kɔɔ.”
^ Nt., “Filistifo mma mmea no mu baako.”
^ Anaa “ɔforo kɔka.”
^ Nt., “ɔno na ɔfata wɔ m’ani so.”
^ Anaa “w’aborɔme.”
^ Anaa “Woato me nkurɔfo aborɔme.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “ansa na ɔrekɔ pia mu no.”
^ Anaa “m’aborɔme.”